Mid ka mid ah dukaamada qalabka korontada ugu weyn ee Japan ee Yamada Denki haatan aqbalay Seeraar
Yamada Denki, mid ka mid ah dukaamada qalabka korontada ugu weyn ee Japan ee, ayaa ku dhawaaqday inay aqbalayaan Seeraar sida habka lacag bixinta.
Waxay yihiin in iskaashi la Bitflyer, iyo inay xusuustaan ​​horumarka cusub, Bitflyer siinayo hadiyad ah 500 yen hore 500 macaamiisha bixinta la Forex ee dalwaddii.
South Korea ee tafaariiqle iyo e-commerce WeMakePrice Rafaa inay aqbalaan 12 cryptocurrencies
of kePrice, si fiican u yaqaan Wemepu, mid ka mid ah dhufto ee e-commerce South Korea ee ugu weyn iyo dukaamada waaweyn ayaa qorsheynaya aqbalayaan 12 cryptocurrencies, oo ay ku jiraan Seeraar, iyadoo la kaashanaysa Bithumb, sarrifka ugu weyn cryptocurrency ee dalka.
WeMakePrice waxaa ku daray cryptocurrencies in ay lacagaha jira madal OneThePay. Marka la qabsashada waa complete, users WeMakePrice jira awoodaan inay iibsadaan alaabta iyo adeegyada la isticmaalayo cryptocurrencies noqon doonaa.
Wareysi uu siiyay warbaahinta caadiga ah South Korean HanKyoReh outlet, Afhayeenka WeMakePrice ah ayaa sheegay in shirkaddu ay ku yimaadaan si ay go'aanka cryptocurrencies dhafaya oo qayb ka ah dadaal weyn si ay u fududayso nidaamka lacag bixinta macaamiisha guud.
"…lacagta ku haboon macaamiisha iyo macaamiisheena. Waxaan ka fiirsan apps fintech mobile, Dhibco, iyo cryptocurrencies sida hababka lacag bixinta hufan,"Ayuu yiri afhayeenka.
war rasmi ah shirkadda ee ku xusan: "Adeeg bixinta Seeraar… adeeg fiicnaaday iyo raaxadeeda. "
BTCC helay by fund maalgashiga blockchain fadhigeedu yahay Hong Kong
Seeraar macdanta iyo is-weydaarsiga conglomerate BTCC ayaa helay by ah fund maalgashiga blockchain magacaabin fadhigeedu yahay Hong Kong. khayraadka ayaa kaa caawin doona maal BTCC ee diirada caalami ah sida baxo suuqa Chinese.
ganacsi BTCC ayaa le'edeen by sharci crack-hoos ee Shiinaha, oo mamnuucay ganacsiga cryptocurrency on dhaafsi ku salaysan ee dalka. Beijing hadda uu leeyahay macdan Seeraar in indhaha qoriga ay, sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay ee FT iyo meelo kale.
Afhayeen A for BTCC yiri: “Waxaan hadda aan la sii daayo macluumaadka on fund ama qadarka khayraadka kiciyey.”
sarrifka BTCC The ka badan baayacmushtari $25 bilyan oo qiimaheedu lacagta birta ah ee 2017. BTCC ee FRANK jeebka, taas oo la soo bandhigay ee March 2017, hadda waxay leedahay macaamiisha ka 180+ dalalka, ku daray afhayeenka u.
Hadal qoraal ah oo BTCC co-aasaasaha Bobby Lee ayaa sheegay in: “afku Maanta waa guul cajiib ah, waayo, BTCC oo qiimaynaya shuqul kasta oo adag in ka badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay. aad ugu faraxsanahay oo ku saabsan khayraadka this siinayaa BTCC inuu u dhaqaaqo dhakhso iyo Colnimo u koraan ganacsiga our in aan ahay 2018 iyo meelo ka baxsan.”
Mastercard ayaa arkay ...
Sharci-dajiyayaasha in laga xoreeyo dalka ah ...